लालचन्द्रलाई ४५ वर्षदेखि एउटै कुर्सी प्यारो ! | NepaleKhabar.com
रामबहादुर थापा / बागलुङ, ८ मङ्सिर । कुनै कृत्रिम रङ्गले होइन, बस्दा–बस्दा कुर्ची टिलिक्क टल्कने भएको छ । चिल्लो, पुतली पनि लर्कलाजस्तो ! ४५ वर्षसम्म लगातार प्रयोगमा आउँदा कुर्ची सायद पातलियो पनि होला, साह्रै हलुङ्गो भएको छ ।